‘रेमिट्यान्समा टिक्नै नसक्ने प्रतिस्पर्धा छैन’ – Businesssansar
‘रेमिट्यान्समा टिक्नै नसक्ने प्रतिस्पर्धा छैन’
On: Apr 27, 2014
धादिङ्ग जिल्लामा जन्मिनुभएका डीपी अर्याल जापानबाट अध्ययन गरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नुभयो । पर्यटन क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा रेमिट्यान्स कम्पनिमा जोडिन पुग्नु भएका उहाँ हाल इजिलिंक रेमिट्यान्सका प्रमुख हुनुहुन्छ । १९९९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पहिलो लाईसेन्स प्राप्त गरी सञ्चालित इजिलिंक रेमिट्यान्सले मनिग्राम लगायत बिभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीहरुसँग मिलेर नेपालमा रेमिट्यान्स भित्राउने काम गरीरहेको छ । बिशेष रुपमा जापानलाई जोड दिएको यस कम्पनिले नेपाल भित्र पनि विभिन्न बैंकहरुसँग सहकार्य गरी रेमिट्यान्स क्षेत्रमा सक्रिय छ । प्रस्तुत छ यसै रेमिट्यान्सका इजिलिंक रेमिट्यान्स प्रमुख डीपी अर्यालसँग रेमिट्यान्स कम्पनि र आर्थिक सवालमा केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानी ।
नेपालमा रेमिट्यान्सको अवस्था कस्तो छ ?
२५ बर्षको हाराहारीमा रेमिट्यान्सले पाइला टेकेको छ । हामी रेमिट्यान्स व्यवसायी भएको कारणले विदेशबाट रेमिट्यान्स आउने काम राम्रो पक्ष हो भन्नु पर्छ । तर नेपालबाट युवाहरु धेरै बाहिरीएको कराणले रेमिट्यान्स भित्रिएको पक्षलाई हेर्दा यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई हेर्न जरुरी हुन्छ । बिदेश गएका नेपालीहरुले उतै व्यवसाय गरेर रेमिट्यान्स भित्रयाउनु भएको छ र त्यो रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोच बनाई राखेका छौं । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा धेरै रेमिट्यान्स भित्राउने कम्पनीहरु त भए, तर त्यो भित्राएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर कुनै पनि रेमिट्यान्सले सोच बनाएका छैनन् । सरकारले पनि त्यो किसिमको नीति ल्याउन जरुरी हुन्छ । सरकारले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
रेमिट्यान्स क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरुको बिचमा कत्तिको प्रतिस्पर्धा छ ?
हामी नेपालीले अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गर्न जानेका छौं । विकास गर्ने मान्छेदेखि राजनीति गर्ने मान्छे सम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने बानी छ । म सम्पूर्ण रेमिट्यान्स व्यवसायीहरुलाई नराम्रो प्रतिस्पर्धा गर्नु भन्दा ग्राहकको लागि राम्रो व्यवस्था दिने प्रतिस्पर्धा तर्फ लाग्न अनुरोध गर्न चाहान्छु । ग्राहकलाई खुशी दिने किसिमको हामीले व्यवसाय गर्न सक्यौं भने त्यो व्यवसाय नियमीत रुपमा सञ्चालन भईरहन्छ । रेमिट्यान्स क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा नभएको होइन तर टिक्नै नसक्ने गरी रेमिट्यान्समा प्रतिस्पर्धा भए जस्तो मलाई लाग्दैन ।
बैंकिङ्ग क्षेत्र र रेमिट्यान्स क्षेत्रमा राम्रो कम्पनी कसरी छुट्याउन सकिन्छ जसले गर्दा भविष्यमा कसैको पनि पैसा नडुबोस् ।
पहिलो कुरा त जनता विश्वस्त हुनुप¥यो । सही र गलत छुट्याउन सक्नु प¥यो । जब हामी बैंकमा खाता खोल्छौं, पैसा जम्मा गर्छौं, रेमिट्यान्सबाट कारोबार हुन्छ । यदि हामी शिक्षित व्यक्ति हौं भन्ने लाग्छ भने कुन संस्थासँग कारोबार गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसको गतिविधि थाहा पाउन जरुरी हुन्छ ।
कुन व्यक्तिबाट चलेको संस्था हो, उक्त संस्थाले कस्तो खालको काम गरिराखेको छ ?
अहिलेको एक्काइसौं शताब्दीमा धेरै किसिमका टेक्नोलोजी अगाडि आई राखेको छ त्यसबाट बुझ्न सकिन्छ र नेपाल सरकारसँग पनि बुझ्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कन्ट्रोलमा रेमिट्यान्सहरु चलिरहेका हुन्छन् र बैंकहरु पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको कन्ट्रोलमा चलिरहेका हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको अर्थको लागि सर्वोच्च अंग हो । अब हामीले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई विश्वास नगर्नु, राष्ट्र बैंकलाई विश्वास नगर्नु हो र त्यो भनेको सरकारलाई नै विश्वास नगर्नु हो । यसकारण बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले पनि ग्राहकहरुसँग जे कुरा भनिन्छ त्यहि कुरा पुरा गर्नु प¥यो र जति पुरा गर्न सकिन्छ त्यत्ति मात्र बोल्नु प¥यो । यसो भयो भने मात्र विश्वासनियता कमाउन सकिन्छ ।
नेपाललाई आर्थिक रुपमा उकास्न के गरिनु पर्ला ?
नेपाललाई समृद्धि बनाउने कुरा धेरै ठूलो हो । सरकारले पनि यो कुराको उत्तर दिन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ । यो देशमा हामीले सोच्ने भनेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कृषिमा ध्यान दिनुपर्छ । यदि देशलाई र जनतालाई समृद्ध बनाउने हो भने नेपालका युवाहरुलाई पलायन हुनबाट जोगाउनु पर्छ र कृषिमा ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि नेपाललाई चिनाउन सक्ने स्थिति छ । अग्रपंक्तिमा कृषि र पर्यटनलाई राखेर काम गर्नुपर्र्छ । हाइड्रो पावर पनि आर्थिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण पाटो हो । यो पनि नेपालको विकास र नेपालीको आर्थिकोपार्जनमा एउटा आधार हुन सक्छ ।
Previous Post: आन्दोलनको झमेलामा चिया बगानहरु
Next Post: टेलिकमको एक महिना निःशुल्क वाइफाई सेवा